Pokémon Go ikozvino inowanika kurodha pasi pane iyo Apple Tarisa | IPhone nhau
Jordi Gimenez | | Apple Watch, IPhone mitambo
Isu tanga takamirira kuenderana kwePokémon Go neApple Watch kwenguva yakareba uye maminetsi mashoma apfuura iyo yekuvandudza kune vhezheni 1.21.2 inoita iyo Apple wachi ienderane nemutambo uyu.
Parizvino tinogona kutaura kuti izvo zvinowedzerwa mune rondedzero yeichi chiitiko zviri pachena uye zvakanangana, Pokémon Go yeApple Watch uye mhinduro yezvikanganiso zvidiki. Nezvo, iyo tweet yavakatanga kubva kuNiantic muna Zvita 17 yakasimbiswa zviri pamutemo, vachitaura kuti vhezheni itsva inoenderana neApple smart wachi yaive padyo kwazvo. Ingori mazuva mashanu uye isu tatova neiyi update inowanikwa.
Iyi ndiyo tweet kubva kunogadzira Niantic iyo yavakamhan'arira iyo pedyo kuvhura:
- GO Pokemon (@PokemonGoApp) December 17 we2016
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutaurwa kuti vatora nguva yavo uye mutambo hausisina huwandu hwakaenzana hwevashandisi hwaakatora pakutanga, asi vashandisi vakaramba vachiridza uye vaine wachi yeApple vachapihwa mubairo. Zviripachena izvozvi zvinogona kudaro neiyi vhezheni nyowani inoenderana neApple tarisa chinhu chacho chakavezwa zvishoma zvishoma. Izvi ndizvo zvimwe zvekutorwa kunoitwa nechishandiso chakaiswa paApple Watch:
1 Ndinoitora sei kuiwachi yangu?
2 Chii chinowedzera kuApple Watch?
Ndinoitora sei kuiwachi yangu?
Iko kunyorera kurodha pasi zvakafanana nechero imwe gadziriso kubvira yakabatanidzwa muApple appNekudaro, zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa uchifunga huwandu hwevashandisi vachazovandudza panguva ino uye mumaawa mushure mekuburitswa kweichi chiitiko. Mune ino kesi, zvakanakisa kuva nemoyo murefu uye kwete kumisa kurodha pasi kunyangwe tikazviona kuti hazvifambire zvakanyanya nekukurumidza. Kamwe kurodha pasi tinofanirwa pinda iyo application yeApple Watch uye dzvanya show paApple Watch.
Chii chinowedzera kuApple Watch?
Ichi chikamu icho isu tese takamirira, kuona uye kuyedza iyo app pawatch. Iko kushandiswa kuri nyore uye kwakajeka sezvo kuchisanganisira gamuchira zviyeuchidzo zvemutambo pane yedu wachi. Tinogona kutanga musangano zvakananga kubva pawachi pachayo, isu tichagamuchira zviziviso nezve Pokémon yatinayo padhuze, pokeparadas uye ruzivo nezve mabheji kana mazai akanyorwa, isu tichakwanisawo kuona matanho atakasiira iyo Pokémon mazai ekuvhura chero nguva kubva panguva yekurinda.
Zvakatora asi iko kwakamirirwa kwenguva refu kushanda kwePokémon Go kweiyo Apple wachi iko zvino kwave kuwanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pokémon Go ikozvino inowanika kurodha pasi paApple Watch
Sezvo ini ndakagadzirisa kune yazvino vhezheni haina kuvhura ... ini ndine jailbreak uye isati yashanda zvakakwana. Pane chero munhu anonzwa zvakafanana ??
Mario Solera Munoz akadaro
Ndakaiyedza kwemaawa mana mangwanani ano; zvese iwatch uye iyo iPhone yaive 4% yakabhadharwa uye yakapera pa100 uye 30% zvichiteerana. Rwendo rwakafambiswa haruna kushandiswa pakuwana zviwitsi kana kusimudza mazai, uye mazaziso maviri epokemon (50 Rattatas, zvakashamisa sei) haana kuenderana nekuonekwa chaiko parunhare. Ini ndinowana fungidziro yekuti ivo havana basa zvachose.
Pindura kuna Mario Solera Munoz
Vakuru veTurkey vanokumbira Apple kuvhura iyo iPhone 4s yemhondi yemumiriri weRussia